Dibad-baxayaal kooban oo isugu soo baxay xarunta Xisbiga Waddani ee magaalada Hargeysa – Puntland Post
Posted on November 18, 2019 November 18, 2019 by CCC
Dibad-baxayaal kooban oo isugu soo baxay xarunta Xisbiga Waddani ee magaalada Hargeysa
Wararka ka imaanaya magaalada Hargeysa ee caasimadda Somalilland, ayaa sheegaya in saaka xarunta xisbiga Waddani ay ku wada- sugan yihiin dibad-baxayaal tiro yar iyo ciidanka Booliiska.
Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee Waddani, Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro, ayaa shalay taageerayaasha Xisbiga ugu baaqay in ay isugu soo baxaan xarunta xisbiga uu ku leeyahay caasimadda Hargeysa, si loogu gudbiyo farriin muhiima oo Somaliland lagu badbaadinayo
Balse, taliyaha ciidanka Booliiska Somaliland, Maxamed Aadan Saqadhi ayaa sheegay in aysan jiri doonin wax bannaanbax oo lagu qaban karo Magaalada Hargeysa “Mudaharaadku sharci buu leeyahay, sharci wax aan waafaqsaneynna yeeli meyno” ayuu yiri taliyaha.
Sidoo kale, Booliiska Somaliland ayaa xalay xabsiga dhigay af-hayeenka xisbiga Wadani, Barkhad Jaamac Batuun iyo xoghayaha xisbigaasi Khadar Xusseen Cabdi, taasi oo sii kululaysay xiisadda siyaasadeed ee u dhexaysa xukuumadda iyo mucaaradka.
Xisbiga talada haya ee Kulmiye iyo mucaaradka ayaa maalmihii u dambeeyay is-dhaafsanayey hadalo kul-kulul oo ku saabsan muranka ka taagan guddiga doorashooyinka. Xisbiga Wadan ayaa sheegaya in laba xubnood oo uu soo xulay Madaxweynaha ay yihiin sharci darro.
Dagaalkii Haramcad iyo NISA ee Dhuusomareeb iyo Galmudug oo ka hadashay
Madaxweynaha Puntland oo la kulmay Isimada Mudug
Dagaal ka socda Dhuusomareeb
Deni: ifafaalaha hadda socda waxaad moodaa in la baabi’inayo Aqalka Sare